Meydka Wasiirkii Waxbarashada Jubbaland oo la keenay Muqdisho - Jowhar Somali news Leader
Home News Meydka Wasiirkii Waxbarashada Jubbaland oo la keenay Muqdisho
Meydka Wasiirkii Waxbarashada Jubbaland oo la keenay Muqdisho
Diyaarad siday Meydka Wasiirkii waxbarashada Jubbaland Macalin Maxamed Ibraahim Maxamuud ayaa saaka ka degtay magaalada Muqdisho, kaddib markii maalin ka hor uu ku geeriyooday magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya.
Meydkan ayaa diyaarad loo soo kireeyay looga soo qaaday dalka Hindiya, waxaana ay xalay ka degtay magaalada Addis Ababa, halkaasoo diyaarad kale oo qaas ahaa looga soo qaaday.
Wararka ayaa intaa ku daraya in diyaarad kale ay maalinta berri Meydka ka qaadi doonto magaalada Muqdisho, lana geyn doono Kismaayo si loogu aaso.
Guddiga qaban qaabada aaska Wasiirkii Waxbarashada Jubbaland oo uu magacaabay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ku jira dadaalkii ugu dambeeyay ee lagu diyaarinayo aaska Wasiirka, iyadoo maalinta berri lagu aasi doona Kismaayo.
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, Madax hore, siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa la filayaa inay ka qeyb galaan aaska meydka, sidoo kalena xubnaha qaar ayaa ka bixi doona magaalada Muqdisho, iyagoo raacaya diyaaradda meydka sida.
Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa waqti iyo dadaal badan ku bixisay sidii Meydka Wasiirka loo keeni lahaa dalka, iyadoo Xaalada adag ay adduunka oo dhan ka jirto oo dhinac socdaalka ah taas oo uu sababay Xanuunka Corona Virus oo dhibaato badan ku haaya dunida, waxaana sidoo kale gacan ka geystay sidii dalka Hindiya looga soo qaadi lahaa meydka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee dowladda Soomaaliya.